Wikipedia:Toosin - Wikipedia
Bog wareejin waa bog ka kooban wax isku mid ah ee ku jira bogga asalka ah ee leh magac kale. Marka la isu xiro wuxuu kaa soo toosinayaa boggii asalka ahaa. Kaba soo qaad waxaad samaysay bog cusub oo ay ku jiraan waxyaabo iska cad (tusaale: maqaal leh magaca "Daa'uud Cabdulle Xirsi" ama wax ku saabsan noloshiisa iyo wax qabadkiisa IWM). Haddii uu ka baaro ruux bogga dhexdiisa qodobka laakiin leh magac kale (Sida: Jeneraal Daa'uud Cabdulle Xirsi, Gen Daa'uud Cabdulle Xirsi, IWM), sidaas ku heli maysid maqaalkii asalka ahaa ee aad ku aragto mid kale. Si loogu damaanad qaado ruuxa baaraya maqaal haba ahaadee mid ku baaray magac aan magacii ahayn ama mid shaabaha, waxaa dhacaysa samaynta Maqaalkaadii koowaad, waxaa laga wareejinayaa maqaalka cusub iyadoo loo wareejinayo maqaalkii asalka ahaa, kaddib waa la kaydinayaa. waxa ay ka mid noqonaysaa Bogagga la wareejiyay. Qaabkaan ayaa bogga loo wareejiyaa ama loo toosiyaa:
#REDIRECT [[Barta la doonayo]]
iyoBarta la doonayo Waa magaca maqaalka la doonayay in loo wareejiyo. waxaa suuragal ah in la sameeyo arrinkaas adigoo gujinaya batoonka ee marinka waxbedelka.
Waxaa la samaynayaa mqaal cusub oo wata magaca "Dawladda Soomaaliya", looga hadlayo siyaasadda sharraxaadna bixinaya, IWM. dabadeedna waxaa la sameynayaa isla magacii oo raacsan DA qodobayn oo ah "Dawlada Soomaaliya" ama qalad dhigaalka ah ee ku baahsan soomaalida dhexdeeda "Dowlada Federaalka Soomaaliya".
Jamhuuriyadda Soomaaliya Bog loo soo wareejiyay Soomaaliya.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Toosin&oldid=164321"
Last edited on 30 Nofeembar 2016, at 14:25
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 30 Nofeembar 2016, marka ee eheed 14:25.